Downloads 82 846
Waxay abuureen 28-10-2014
Author: Alejandro Rojas Lucena, David Robles https://www.youtube.com/watch?v=rJyuXLVPf9Y&list=UUKFYbDe0mheZ-llBTVQnHrA
Boeing 717 waa diyaarad ganacsi oo la dhisay by Boeing. Waxa ay ahayd diyaarad yar oo ay kala duwan. Bilaabay in 1995 magaca MD-95 ahaa raad ugu dambeeya ee brand ee McDonnell Douglas soo iibsaday by Boeing ee 1997. Doorshadan 717 ayaa waxaa markii hore loogu tala galay in loo saarin in version milatariga ah 707, ku-C 135 laakiin lama isticmaalo oo sidaas daraaddeed u soo noqoteen MD-95.
Tani kursigii 100 diyaarad ganacsi oo marnaba aysan awoodin in ay gaaraan ay bartilmaameed, iyo go'aanka in ay qabtaan waxaa si cad u shaacisay in bartamihii January-2005 by Alan Mulally, madaxweynaha of kala qeybinta diyaarad ganacsi Boeing ee: "suuqa ee diyaaradaha tani ma sii wadi in ay soo saaraan 717 shisheeya amarada our jira. ". Laakiin go'aanka loo hagaajiyey tan iyo dabayaaqadii 2001 iyo dhowr boqol oo milyan oo doolar ayaa loo qoondeeyay ujeedadaas. (Wikipedia)
bandhig A buuxda oo ku add-on this waa la heli karo in video hoos ku qoran: